Ny mpamokatra sinoa tsara indrindra mpamorona biby vozon'akano RFID tag QR code NFC alika biby fiompy alika tag RFID Mpanamboatra sy Factory | Hobrin
Mpanamboatra sinoa collar identifié RFID tag QR code NFC alika biby fiompy alika RFID
● Fanodinana: Fanontana maty / fanontana 4-loko
● Fitaovana: Copper / Stainless Steel / PET
Dongguan Hobrin Badge sy Gift dia nandray anjara tamin'ny fanaingoana ireo biby fiompy biby fiompy hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 2012, ary iray amin'izany ny tag mpiompy NFC. Noforoninay hanamora ny fahitan'ny biby fiompy very ny tompony. Ny fitiavantsika ny biby sy ny biby no nanentana antsika hanao an'io. Raha toa ny hevitrao dia ny mamorona tag alika izay manome mihoatra ny nomeraon-telefaona fotsiny. Taratasy misy fampahalalana marani-tsaina izany, ny fisafidianana ireo tag biby fiompy NFC no safidinao hendry.
Manome endrika anatiny bebe kokoa izahay, marika ID, tagan'ny kaody QR, marika NFC manerantany sy namboarina ho an'ny marika ara-barotra, indostrialy na biby. Niely nanerana an'izao tontolo izao ireo marika NFC, kalitao tsara ny labels misy vidiny mirary. Mifandraisa aminay raha ilaina.
NFC Pet tag. Tohano ny fampiasana nfc mpamaky na nfc finday hamaky tag, ary avy eo asehoy ny mombamomba ny biby fiompy.
Ny tag NFC dia manampy amin'ny fisorohana ny biby fiompy very. Tohano ny fanontana manokana. Ataovy pirinty kaody QR eo amin'ilay marika, ary rehefa scan'ny olona ny kaody QR dia haseho ihany koa ny mombamomba ny biby.
Raha ampitahaina amin'ny tag nentin-drazana, ny tag NFC dia mitahiry fampahalalana bebe kokoa. Tsy misy vidiny mitohy aorian'ny fividianana. Izy io koa dia azo averina programa. Ny endrika am-boalohany any aorina dia ny maodely hita maso ny tagan'ny biby manan-tsaina rehetra. Izany dia miantoka fa izay mitady dia mahalala izay tokony hatao raha mahita ny biby fiompy very ianao.
Ny tag NFC dia afaka mitahiry ny mombamomba anao isan-karazany. Azonao atao ny manampy nomeraon-telefaona maro, adiresy an-trano, piraofilin'ny media sosialy, adiresy mailaka, sns. Afaka misafidy ny hampiditra fampahalalana rehetra ianao. Arakaraka ny maha-tsara kokoa.
Ny tag NFC biby dia tsy mila batterie hiasa satria fitaovana passive io. Midika izany fa maimaim-poana ny fandanianao vola ary tsy mila famerenam-bola. Mampiasa angovo kely avy amin'ny finday avo lenta izy hitadiavana vaovao. Tsy tantera-drano koa izy io.
Ny viewfinder dia mitaky smartphone finday NFC hamaky ny tag. Kitiho fotsiny ny marika mba hiantsoana ireo vaovao. Reprogrammable ihany koa izy io, izay tena mety rehefa miova ny vaovaoo.
Hobrin Badge sy ny orinasa Gift tag nFC namboarina ho an'ny biby fiompinao!
Tsy misy sarany fanampiny na saram-pisoratana anarana - marika manokana fotsiny!
Ny tag sy ny petite ID Pet dia manome fampahalalana feno ho an'ireo olona mamerina ny biby fiompy.
Fomba ekonomika iray hampitomboana ny fiarovana sy hikarakarana ny biby fiompinao!
* Kaody QR | URL hitsidihana tranonkala web
Nampiasaina tamin'ny fanarahana fananana very na famonjena RFID vahaolana ho an'ny olona, ​​biby fiompy, kitapo, sns., Miaraka amina chip NFC Ntag213 namboarina. Manonta kaody QR tokana sy laharana serial. Ny url dia voahodidin'ny chip NFC. Ny url code QR dia mitovy amin'ny chip url. Ny olona manana telefaona NFC dia afaka mamaky ny NFC. Manokatra ny URL ny puce raha te hahazo vaovao momba ny famonjena na fampahalalana momba ny fifandraisana / tompony, ary ireo izay tsy manana telefaona NFC dia afaka mizaha ny kaody QR hanokatra ny URL
Anaran'ny vokatra Fanontana kaody QR natokana ho an'ny marika RFID NFC
Fitaovana ambonin'ny Waterproof PVC na PET (fanoherana simika sy hafanana) na taratasy, resin epoxy, sns.
Size Boribory: savaivony 30mm, 34mm, sns.
Base Varahina / vy tsy miova / aluminium
Pringting Fanontana LOGO 4C namboarina na laharana serial, kaody QR
Teo aloha: China mpamatsy fanao fanao logo zinc firaka kitapom-batsy aforitra latabatra fonosana hanger hook
Manaraka: Mpanamboatra sinoa tsara tarehy epoxy overlay QR tag / ID pet pet / pet identité pet
Fomba fanao tsara tarehy nataon'ny mpanamboatra sinoa ...